Format ချနည်း ~ ဇင်ကို(နည်းပညာ)
10:53:00 pm Format ချနည်း2comments
တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်သုံးနေတဲ့ USB,Memory Card လေးတွေက အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖိုင်လ်တွေ ထပ်ထည့်လို့ မရတော့တာမျိုး၊ ထုတ်လို့ မရတော့တာမျိုး၊ Format ချမရတာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အဲဒီလို ပြဿနာမျိုး ကြုံလာခဲ့ရင် ဒီနည်းလမ်းအတိုင်း ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်...။
USB Memory Stick ကို ကွန်ပြူတာမှာ တပ်ထားပါ...။
Start > Search box ထဲမှာ devmgmt.msc ရေးပြီး Enter ခေါက်ပါ...
Disk Drives ဆိုတာလေးကို ကလစ်လိုက်ပါ အဲဒီမှာ ကိုယ့်ရဲ့ USB Drive ကို တွေ့ပါလိမ့်မယ်။
USB Device ကို Double Click (or) Right Click ထောက် Propereties ကိုနှိပ်ပါ။ နောက်ထပ် Box လေးပွင့်လာရင် အပေါ်က MenuTab မှာ Policies ကိုနှိပ်ပြီး "Optimize for performance" ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ။ Window7မှာတော့ (“Better performance”) လို့ပေါ်ပါတယ်..။
အားလုံးပြီးရင် My Computer ကို ပြန်သွားပြီး USB Drive ပေါ်ကို Right click > Format ချကြည့်ပါ။ Format ချတဲ့ နေရာမှာ File System ကိုကြည့်လိုက်ရင် NTFS Format Option ကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
USB drive ကို NTFS နဲ့ Format ချလို့ရပါပြီ...။
Format ချမရတဲ့ Memory Stick ပြုပြင်နည်း
သဘောတရားကတော့ Format ချခိုင်းတယ်ဆိုတာက တနည်းအားဖြင့် File System မရှိလို့ပါပဲ။ Format ချလည်း မရတာကတော့ Partition Table က Corrupt ဖြစ်လို့ပါ။ အဲဒါကြောင့် Partition Table ဖျက်ပြီး အသစ်ပြန်ဆောက်၊ ပြီးတော့ File System ပြန်သတ်မှတ်လိုက်ရင် ပြန်ကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ လိုအပ်တဲ့ Software ကတော့ နှစ်ခုတည်းပါ။Test Disk ရယ် Bootice ရယ်ပါ။ ပထမဆုံး Test Disk ကို Run ပါ။ အောက်မှာပြထားသလို ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
Perform Format ကို နှိပ်ပါ။ နောက်တစ်ဆင့် ပေါ်လာရင် USB-HDD mode (Single Partition) ကို ရွေးပါ။ Next ကို နှိပ်ပါ။ Dialog box ပေါ်လာရင် OK နှိပ်ပါ။ ဒါဆိုရင် Format စရိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ရပါပြီ စာဖတ်သူရဲ့ Stick အပျက်ကလေး ပြန်ကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။
USB Drives တွေ Format ချမရရင် စမ်းကြည့်နိုင်ဖို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်....:)
Description: Kingston USB drives are pre-formatted withaFAT32 file system for cross platform compatibility and for optimum performance. Formatting this drive with Windows, Mac or Linux may causeaperformance decrease. The solution to obtain the best possible performance is to format the drive with the Kingston utility located below. Note: ALL DATA WILL BE ERASED. Please back up the data stored on the Hyper X drive before using the Kingston Format Utility. Supported Operating Systems: Windows7(SP1), Vista (SP1, SP2) and Windows XP (SP2, SP3)
Click Here to Download Kingston USB Drives
USB , Memory Card. Flash Drive တွေ Format ချမရဖြစ်နေရင် ဒါလေးသုံးကြည့်ပါ...။
Format USB Or Flash Drive Software isahandy and reliable application designed to format
USB flash Drive ကို NTFS system နဲ့ Format ချမယ်
5:40 PM Windows No comments
NTFS system ဟာ FAT နဲ့ FAT32 system တွေနဲ့ယှဉ်ရင် အားသာချက်တွေရှိအမြောက်အများရှိနေတာကြောင့် FAT32 system ကိုသာများသောအားဖြင့် အသုံးပြုထားတဲ့ USB flash drive တွေကို NTFS system နဲ့အသုံးပြုလို့ရအောင် ဖန်တီးပြမှာဖြစ်ပါတယ် NTFS system ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် သင့် stick ဟာ memory ပိုမိုဆံ့လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် ကဲစလိုက်ရအောင် အရင်ဆုံး NTFS system အဖြစ်သုံးချင်တဲ့ USB Flash Drive ကို ကွန်ပြူတာမှာတပ်ထားလိုက်ပါ ပြီးရင် My Computer မှာ RC(right click) နှိပ်ပြီး properties ကိုသွားပါ ။ ဒီအဆင့်ပြီးရင် Hardware ကိုဆက်သွားပြီ Device manager ကိုအဆင့်အတိုင်းဆက်သွားပါ Device Manager ကိုရောက်ပြီဆိုရင် သင့်ရဲ့ Flash Drive name ကိုလိုက်ရှာပါ ပြီးရင် drive name ပေါ်မှာ double click နှိပ်ပါ properties ပေါ်လာပါမယ် Properties မှာတစ်ဆင့် policies ကိုဆက်သွားပြီး Optimize for Performance ကို check ပေးပြီး OK ပေးပါ ဒါဆိုရင်ပြီးပါပြီ ပြီးရင် My Computer ကိုဝင်ပြီး Stick ကို Format ချပါမယ် Stick volume name ပေါ်မှာ RC နှိပ်ပြီး Format ကို click နှိပ်ပါ NTFS ဆိုတာတွေ့ပါမယ်..။အဲ့ဒါကိုရွေးပြီး Format ချလိုက်ယုံနဲ့ သင့် stick ဟာ NTFS system ဖြစ်သွားပါပြီ..။
အဆင်မပြေသေးရင်အောက်မှာ Video File ရှိပါတယ် ကြည့်ကြည့်ပါ..။
zawmoe moe 15 August 2015 at 09:25
zayyezgn.blogspot.com 16 August 2016 at 16:51